Nadiifi taariikhda Git > Vielhuber David
Nadiifi taariikhda Git09
Xogta xasaasiga ah sida furayaasha sirta ah waa inay ku jiraan faylasha .env iyo, haddii ay suurtogal tahay, kuma ekaan meelaha kaydinta Git. Laakiin waxay u badan tahay inay ku dhacday mid kasta oo naga mid ah ugu yaraan hal mar si qalad ah: Si dhakhso leh loogu daabacay qoraalka Google Maps JS API ee GitHub Gists (sida "dadweynaha") iyada oo aan si lama filaan ah loo qarineynin furaheena Khariidadaha gaarka ah ee API.
Nasiib wanaag, kooxda dhegaysiga ee Google Cloud Platform Trust & Safety ayaa dhowaan bilaabay inay farahaaga ku garaacaan emayl otomaatig ah oo aan kaliya ku karkarin github.com furayaasha API ee dadweynaha si baaxad leh:
Macmiilka qaaliga ah,
waxaan ogaanay furaha guud ee Google API ee la heli karo ee la xiriira mashruuca Google Cloud Platform ee soo socda:
Markaa waa waqtigii wax laga qaban lahaa ugu dambayn. Nasiib wanaag, xitaa Git waa la cafin karaa. Qoraalka bash ee soo socda wuxuu adeegsadaa nadiifiyaha weyn ee BFG repo (maya, tani macnaheedu maahan hubka DOOM) wuxuuna ka saaraa furaha API -ga safka 5 ee bakhaarka Git ee safka 6:
PS: Furaha API ee safka 5 waa kaftan.